यातायात खोल्ने सरकारको निर्णयलगत्तै – Khabar Silo
यातायात खोल्ने सरकारको निर्णयलगत्तै
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायत खोल्ने सरकारको निर्णयपछि नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । सरकारको निर्णयका सम्बन्धमा माहासंघको आधिकारिक धारणा तय गर्न उक्त बैठक बोलाइएको हो ।
महासंघले आधिकारिक निर्णय विना सरकारको निर्णयको स्वागत वा विरोध केहि पनि नगर्ने नीति लिएको छ । तर उक्त निर्णय आमसञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउनुपरेको र यातायात खोल्ने सम्बन्धमा आफुहरुसँग कुनै छलफल नगरिएकोमा महासंघ असन्तुष्ट बनेको छ ।
‘सार्वजनिक यातायात खोल्ने सरकारी निर्णय सञ्चार माध्यमहरुमा आएपछि मात्र हामीले थाहाँ पायौं । के कसरी खोल्ने हो, कुन मापदण्डमा अप्नाइने हो सो जानकारी छैन । यसमा हामी अन्यौलमै छौं’ महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले भने, ‘यो सम्बन्धमा हामीले अहिलेनै केहि पनि धारणा बनाएका छैनौं । आकस्मिक रुपमा भोलि बैठक बोलाएका छौं ।’
महासचिव सिटौंलाका अनुसार महासंघले भोलि शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बैंठक बोलाएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्दा र खोल्ने निर्णय गर्दा समेत सम्बन्धित व्यवासयीहरुसँग कुनै छलफल नगरेकोप्रति व्यवसायीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
महासंघकै ट्याक्सी तर्फका केन्द्रिय सदस्य अर्जुन गौतमले सार्वजकि यातायात सञ्चालन गर्न दिने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य भएपनि कुनै मापदण्ड र योजनाविना घोषणा मात्र गरिएकाले व्यवसायीहरु अन्योलतामा परेको बताए ।
यता सरकारले भने काठमाडौं उपत्यकामा छोटो दुरीका सार्वजनिक सवारी साधन चल्न दिने निर्णय गरेको छ । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहिबार सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सार्वजनिक यातायात खुल्ला गर्ने जानकारी दिएका छन् ।
कोभिड–१९ सँगै सरकारले आह्वान गरेको लकडाउनका कारण गत चैत ११ गतेदेखि देशभरका सम्पूर्ण सर्वाजनिक यातायात बन्द हुँदै आएका छन् ।
आज परीक्षा भएका विद्यार्थीले के गर्ने ? के के बन्द हुन्छन् ?
प्रचण्ड–नेपाल समूहले भोलि (बिहीबार) देशव्यापी आमहड्तालको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रतिनिघि सभा विघटन विरुद्ध संघर्ष समितिले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीबार देशव्यापी आमहड्तालको घोषणा गरेको हो। ‘हामी सरकारको कदमविरुद्ध बाध्य भएर आमहड्तालजस्तो कार्यक्रम गर्न बाध्य भयौँ, त्यसका लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा नेत्री पम्फा भुसालले भनिन्। उनले आज (बुधबार) साँझ […]
काठमाडौं आउन पीसीआर परीक्षण गराउँदा कोरोना पुष्टि
Posted on July 29, 2020 July 29, 2020 Author khabar silo
१४ साउन, काठमाडौं । धादिङमा आँखाको उपचार गर्न काठमाडौं आउने तयारीमा रहेका एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । आँखाको उपचार गराउन काठमाडौं आउनुपर्ने भएपछि कोरोना संक्रमण परीक्षण गराएइका ४७ वर्षका पुरुषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको नगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक शिव रानाले बताए । ‘निलकण्ठका ४७ वर्षीय पुरुषले काठमाडौंमा आँखाको अप्रेसन गराउन जानुपर्ने भन्दै स्वाब संकलन […]